BursaRay güzergahında çalışan dolmuşlar kaldırılmalı | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGawaarida la soo saaray oo ku yaalla waddada BursaRay
Gawaarida la soo saaray oo ku yaalla waddada BursaRay
11 / 01 / 2018 16 Bursa, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Kuwa u maamulaya magaalada, sida kuwa ku nool magaalada, gaadiidku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee magaalada. Qof kastaa wuxuu ku raacsan yahay tallaabooyinka loo qaaday si loo xalliyo dhibaatada. First of all, waxaa la codsaday in ay ka saarto basaska yar oo ku socdo waddada BursaRay.
Event Columnist Newspaper arrinta Mustafa Özdal ee geeska arrimaha la joogo qaaday in shaqada gaar ahaan dhinaca Xirfado minibüsçü xitaa wuxuu qoray in Ankara waa raaxo shaqeeya sidan oo sheegay in la fahmo sababta dhibaatada weli aan la xalin.
Waaxda Boliiska ee Bursa waxay sheegeysaa in basaska laga adeegto wadada Ankara Road waa in laga saaraa.
Duqa Magaalada Boosaaso Alinur Aktas, oo ah masraxa basaska.
Dadweynaha ayaa ka careysiisay basas yar waxayna doonayaan inay xalliyaan dhibaatada.
Gudaha UK, go'aano ayaa la sameeyey kuwaas oo ay ka mid yihiin boodhadhka yar-yar ee ka yimid Ankara Road marar badan.
Iyadoo kaliya tiro yar oo ka mid ah dadwaynaha CHP iyo madaxa gobolka, qof walba waa ogyahay inaysan jirin baahi yar ee basaska marka ay tahay BursaRay, sababtoo ah waxay ogyihiin in gawaaridu ay jahawareeraan gaadiidka.
Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in shalay aan bartay in buundooyinka yar yari aysan aad u xiiseyneynin in ay ka shaqeeyaan wadada Ankara.
Taliyaha Bilayska Boosaaso Cismaan Ak, oo ah basaas yar, oo akhrinaya sharaxaadda Guddoomiyaha Madoobe ee Kestel Meysun Quince shalay.
"Hadda annaga noo dhageyso," ayuu yiri Boqorka Ayva, "BursaRay sababta keentay in aan dhulka la dhigin," ayuu yiri.
Anigu ma maqlo, waxaan u sheegaa Ayva inuu sii socdo oo uu sheego waxa aad tiraahdo.
Ma ahan kuwo aad u adkeynaya bixinta adeegyada gobollada ay tahay BursaRay. Waxaan u furan nahay dhammaan noocyada soo jeedinta, waxaan u taaganahay xal.
Xitaa wakiil ka mid ah ganacsiyada yar yar ayaa sheegay, in aan diyaar u nahay inaan ka baxno Ankara Road Minib waxaanan ku adagtahay inaan fahmo sababta dhibaatada aan loo xallin karin.
Dhamaan daneeyayaasha arrintani waxay ku dhow yihiin isku mid, hase yeeshee dhibaatadu weli waa dhibaato.
Xaqiiqdii, suurtagal maaha in la baabi'iyo dhibaatada gaadiidka iyada oon qaadin basaska yar ee halbowlayaasha.
Aniga ma ahan, mas'uuliyiin, khabiiro iyo xataa xitaa kuwa yaryar.
Isha: www.olay.com.t waa
Dhaqdhaqaaqa mashruuca Mersin Light Rail System, basaska yar ayaa ku jira sheegashada
Shaqaale ee Tareenka Dhismaha Tareenka
Haweeney isku dayday inay riyaheeda ka ilaaliso tareenka
Ku sii wado Terminal Bursaray
Peker, TCDD Qorshaha wax ka beddelka wareysiga waa in laga saaraa
Midibus iyo minibuses in Antalya ku biirto taariikhda
Basaska yar ee Samsun ma tagaan OMU
Immisa qof ayaa ku jiri doona baska yar ee Trabzon?
Taksiyada ku yaal Trabzon waxay ku noqdaan Taksi
Taksi, Minibus iyo Minibuses ayaa ku faafa Istanbul
Duufaan ku dhuftay Bursaray Station
Muuqaal Wacan Bursaray | Khadka Bari ee BursaRay III. Heerka Korantada…
Eeg Tusmada Faahfaahinta Alinur
Waaxda Booliska ee Bursa
Dhibaatada shaqaalaha shirkadda hoos yimaada ee IZBAN ayaa lagu xalliyay
Gawaarida Metro ma aysan dhaafin Yavuz Sultan Selim Bridge